Thursday June 11, 2020 - 12:59:13 in Wararka by Liibaan Jeexoow
Kulanka ayaa waxaa kasoo qeyb galay, Dadkii shirkadda dhulka ku qabsaday, garwadeeno odayaal dhaqameedyo ah, Sharci yaqaano iyo xubno ka tirsada shirkadda Dhismaha Buruuj.
Dhulkaas waxaa ay maxkamada goolka banadir ugu xukuntay lahaanshiyihiiisa shirkada buruuj tar markay eheed 10-10-2019, kadib dadkii laga xukumayay dhulka oo ah kuwii shirkada Buruuj ku qabsaday waxa ay ka qaateen xukunkaas racfaan. kadib waxaa soo dhexgalay arintii dad odoyaal ah kuwaas oo ku taliyay in dukumintiyada laba dhinac wax ku sheeganayaan loo bandhigo si ay hubin ugu sameeyaan Ingineero kamid ah dowlada hoose iyo hay’adaha dhulka taasoo la isku waafaqay dhinacyada oo dhan.
Hubin dheer kadib waxa ay cadeeyeen Ingineeradii iyo sharci yaqaanadii dhulka in shirkadda dhismaha Buruuj Dukumintigeedu uu yahay midka saxda ah milkiyadda dhulkaasna ay ayadu leedahay, natiijadaas oo noqotay natiijo ay shirkadda Buruuj iyo dhinicii haystaba ku qanceen.
Talaadadii oo ay taariikhdu tahay 09-06-2020 ayaa lagu balamay in lasoo bandhigo natiijadii barista ayadoo ay goobjoog yihiin darafyadii ay arintaasi quseeysay waxaanna goobta ka hadlay ugu horeen Genaral Sh Yuusuf Maxamed Siyaad (Indhacade) oo cadeeyay natiijadii barista ahaana gudigii dhexgalka.
Waxaa sidoo kale kale goobta ka hadlay Xasan Axmed Sadiiq oo ku hadlayay magaca dadkii dhulka ku sheeganayay shirkada buruuj oo ay hareer taaganyihiin xubnihii saaxiibadiis ahaa oo ay kamid yihiin Cabdiaxman Axmed Guuleed, Caasho Malaaq Mahdi, Haweeya Xirsi Faarax.
Ugaas Daahir Ugaas Yuusuf iyo xubno kale kuwaasoo dhamaantood cadeeyay in aysan dhulkaan leheeyn isla markaana ay ku qanacsanyihiin go’aanka garwadeedana, Ingineerada dhulka, iyo sharci yaqaanada una hogaansameen isla markaana cafis weydiistay shirkadda Dhismaha Buruuj iyo saamileydeeda.